Yaa Oromoo Rabii malee homaa hinqabddu!!kunoo laalame harkaa kennun ofti roorisaa jabeesa dha. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYaa Oromoo Rabii malee homaa hinqabddu!!kunoo laalame harkaa kennun ofti roorisaa jabeesa dha.
Yaa Oromoo Rabii malee homaa hinqabddu!!kunoo laalame harkaa kennun ofti roorisaa jabeesa dha.
Yaa Oromoo Rabii malee homaa hinqabddu!!kunoo laalame harkaa kennun ofti roorisaa jabeesa dha.Tigrayii deemsii gara Finfinnee jechaa jirti.
Abiy barana inumaa hin baatuu.Garuu;Gochi Yaa waraanaa bilsummaa oromoo(WBO)kana laalame waan hojii waraanaa mootummaa itiyophiyaa kaati waraanaa bilsummaa oromoo WBO tokko qabdani itti roorisaa jiran kunoo laalame harkaa kennun ofti roorisaa jabeesa dha.
እጅ መስጠት መሌት እራስን እንዳ መግዳል በራስ ለይ መጫመለቅ ነው
Waraanni goolessituun shiftaan impaayeera Itoophiyaa uummaata oromoo irraatti dararaa fi saamiicha gaggeessuu jabeessee itti fufuun gujii lixaa aanaa Dugdaa Daawaa ganda Mokkoonisa magaadatti WBOn as dhufee guyyaa 15 as tureera fidaa jechuun.
~uummaata reebdee dhiiraa dhalaan dararuun uummaata goolaa turaan
~mana obboo Bunoo shonee gubaan
~mana abbaa isaa kan obboo shonee gubaan.
~warraa mana jalaa gubaan kanneen jalaa loon mooraa guutuu irraa fudhaatan.
bifuuma walfakkaatuun magaala fincaawaattis.
~dubaartoota hawwaan magaalaa keessaa nama 230 waliitti qabuun eenyu filaattu jennaan amma siniitti himuu hin
dandeenyu gaafuuma filaannoon gahee beekna jennaan, dirqiin nuu filuu qabduu nu malee eenyullee filuu hin dandeessan eenyu akka filuu feetaniis nutti himuu qabduu jechuun doorsisaa oolaan.
Via: Ijoollee Gammoojii
Duulli Oromoo lafarraa duguuguu Oromiyaa lixaa fi kibbatti eegale ammas gara Karrayyuu fi Boosat darbuun lubbuun namoota nagaa darbe.
Namootni Nagaan waraana mootummaa Dr Abiyyiin bobbaaseen lubbuun namoota sadii darbe.
Uummatni Oomoo Karrayyuu Ituu waggoota dheeraaf tokkoomuun duudhaa, seenaa, seeraa fi heera isaanii tikfachuun uummata Oromoo naannoo biroo jiraataniif fakkeenya ta’uu isaanii seenaatu ragaa baha. Dhaaba isaaniis(ABO) haala boonsaa fi jabina qabuun tikfachaa turaniiru.
Haa ta’u malee diinni sabboonummaa fi tokkoomuu uummata kanaa jibbu yeroodhaa gara yerootti shira garaagaraa shiruun uummata haalaan jabaa kana laamshessuuf yaalii gochaa turaniiru; jirus!
1. Gosa jajjaboo kana lamaan walitti buusuu
2. Humna nageenya mootummaa uummata oromoo siivilii aanaa kanaa irratti bobbaasuun shororkeessuu, hidhuu fi ajjeesuu.
3. Namoota wayyaanee uummata kana saamaa turan fedha uummataa malee aangoo irra kaa’uu
4. Baajeta guddaa karaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Naannoo Amaaraa ramaduun ergamtoota gahee walitti buusuu bahaniif kaffaluu
5. Lafa Karrayyuu Qoorkee(Awuraa Godaanaa) dabarsanii Mootummaa Naannoo Amaaraaf laachuu irra darbanii raayyaa ittisa biyyaan tika gochuu fi kkf shiruun tokkummaa uummata kanaa cabsuu fi kaayyoo Qabsoo Bilisummaa lafa kanaa uugguruuf yaaluutti jiran.
Sababa kanaan hanga har’aatti lubbuun nama baay’ee darbee kaan madaa’ee kaan immoo mana hidhaa jira.
Lola kaleessa Guraandhala 5/2020 uummata irraa meeshaa hiiksisuuf RIB fi Humna Addaa Oromiyaa Aanaa Fantaallee guutuu keessatti ta’een lubbuun namoota sadii yoo darbu baay’een mada’uun meeshaa uummata irraa hiikameera.
Namoota Lubbuun darban:
1. Adam Bulee
2. Sayidoo Boruu
3. Godaanaa Jiloo Mi’eessoo yoo ta’an
Namootni meeshaan irraa hiikame
1. Jiloo Tulluu
2. Boosat Gurraacha
Kanaaf uummatni oromoo birmannaa kan oromummaa uummata Keenya Karrayyuu fi Ituuf akka taasisu dhaamsa oromummaa dabarsina!
Dhaddacha Shiraan Guutame
Har’a Guraandhala hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Oromummaa isaaniitiif qofa hidhaman, kanneen Takkaallinyi Mardaasaa jalatti himataman namoota 16 Mana Murtii dhiyaassuun “Himatamaa 17ffaa nama Daawwit Shiiramuu jedhamutu hin dhiyaanne” jechuudhaan baatii sadii dura ofumaan wabii Qarshii 4, 000 tiin baasanii sababa ofii uumanii shiraan beellama baatii lamaa fi torban tokko irratti fudhatan. Beellama shiraa kanaanis, Ebla 9 fi 10 /2020 (Ebla 1 fi 2 /2012)tti akka dhiyaatan murteessan.
Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunneen 13 Qilnxoo zoonii 1, 3 ammoo Qaallittii keessatti hiraarfamaa jiru.
1. Prof. Bayyanaa Ruudaa
2. Obbo Mohaa Abdiisaa
3. Saadiq Kaliifaa -(Qaallittii)
4. Addunyaa Keessoo
5. Gadaa Bultii
6. Bulchiinsaa Balaay
7. Falmataa Girmaa
8. Farajaa Getaachoo
9. Abdii Kumsaa
10. Abshiruu Kadiir
11. Abubakar Nuuree
12. Taarikuu Abdiisaa
13. Caalaa Usmaa’el -(Qaallittii)
14. Aabbuu Lammaa
16. Abubakara Abdallaa -(Qaallittii
Haaluma wal fakkaatuun, hdhamtoonni Oromoo Yaasoo Kabbabaa jalatti himataman:-
1.Yaasoo Kabbabaa Hordofaa
2. Ifireem Galataa
3. Firaa’ol Indaaluu
4. Galaan Waaqjiraafi
5. Fiixaa Caalaa faa ammoo dhaddacha shiraa har’aatiin sababaa tokko malee beellama baatii tokkoo fi torban 1 irratti fudhachuun Bitootessa 9/2020 (Bitootessa 2/2012) tti akka dhiyaatan murteessan.
1. Damee Baacaa fi
2. Ijoo Fiixee Ebla 15/2020 (Ebla 7/2012) tti beellamanii jiru.
Dhaddachi shiraa kun abbootii alangaa waliin maal jechuu fi murteessuu akka qaban dursanii fixanii dhufu.
Bakka sanitti abukkaattoowwanis tahan, himatamtoonni wanni isaan dubbatan fldhageettii fi dhiibbaa tokkollee hin qabu. Waanuma karoorsanii dhufan qofa murteessanii ba’u, abbootiin murtii shiraa kunneen.
Freedom House: Statement from the Ethiopia Working Group
Ethiopia: New airport plans are too ambitious to be run by state bureaucracy